Indlela yokukhetha indoda efanele
Ukuphila kowesifazane wesimanje kuhlanganisa ukuthola umlingani empilweni nokukhetha indoda. Indlela yokukhetha indoda efanele? Owesifazane ngamunye ufuna ukuba nendoda eqinile futhi ehlakaniphile eduze kwalowo umuntu angathembela kuye futhi ngokungahambisani angabeka konke ukukhathazeka kwezwe. Kodwa ngesikhathi esifanayo, iningi labesifazane kusukela esemncane lihlakulela uhlamvu oluqinile, olunikeza isifiso sokuzimela kanye nesifiso sokuyala. Lokhu kunikeza owesifazane isizathu sokumemezela ukungathandi kwabo ukulalela omunye umuntu, naphezu kokuba abesifazane abaningi bebhizinisi bakhala ebusuku emcongeni futhi bezithanda ngobuqotho bona ngokwabo abaphumelelanga kakhulu kodwa bajabule emshadweni wabangane.
Emazweni aseNtshonalanga, lokhu kubizwa ngokuthi igama elihle lobufazi, kodwa zonke lezi zimfanelo zehlela kubantu abadumile besitshela ukuthi isimo semvelo sabantu besifazane sithinteka kanjani, ukuthi owesifazane angaba indoda ngesikhathi esisodwa. Ngokuphindaphindiwe, abesifazane abaningi bahlala ezikhundleni eziphambili ezinkampanini ezinkulu, ubuchwepheshe besilisa, bezama ukufakazela ukuzimela kwabo. Zonke lezi zenzo zabesifazane zivusa ukuthambekela komphakathi wanamuhla ukuya ekuzalweni komzimba futhi bafundise abalingiswa bamadoda anamuhla, okwenza ukuba izingane zingabonakali futhi zingakwazi ukucabanga ngokuzimela.
Ngokuvamile, uma ufuna umlingani wokuphila, owesifazane akabheki izindlela eziyinkimbinkimbi, kodwa umane nje ukhetha indoda efanelekayo kuye ukuze kungadingeki ukuthi ashintshe imikhuba yakhe nokubuka umhlaba wonke, ulalele ukwaziswa mayelana nemisebenzi yalona wesifazane futhi nje ukhululeke futhi ube mnandi. Ngakho-ke, endleleni yabesifazane banamuhla baningi futhi bahlangana nabantu abancane. Ekuboneni kokuqala kunzima ukucacisa ukuba khona komlingiswa osemncane kumuntu - ngokuvamile abantu abanjalo babheka esikhundleni somuntu kusukela kokuqala (nakwesibili!) Bheka, ngendlela yokuxoxisana nezintandokazi eziyisisekelo, amadoda angama-infants avela abameleli bobulili obunamandla. Iqiniso kuphela elikwazi ukuqapha ngokushesha - lokhu ukulungiswa ngokweqile, njengoba izifo eziningi ezithinta izidakamizwa ziyi-metrosexuals. Yonke impilo yabantu abanjalo ihamba ekukhulekeleni okungenakufanelekela kubo, abathandekayo, ukwaneliseka kwezidingo zabo nokwesaba kwanoma yimiphi imithwalo yemfanelo. Uma ukhuluma ngobuhlobo obunjalo umuntu onjalo angenza umuntu odidekile noma nje abalekele, ekhuluma ngezinto eziphuthumayo. Emva kwalokho, uzodlula umgwaqo wakhe weshumi bese ekhononda kubangane ukuthi abanaso isikhathi sokuqala ubuhlobo, futhi kuye bafuna okuthile.
Kungenzeka yini ukuba nenyunyana ehambelana nendoda encane?
Amadoda angama-intanethi angaboni iphuzu ebuhlotsheni obunzima nomshado, ngoba bakholelwa ukuthi intsha nentsha izohlala kuze kube phakade, kuyohlale ikhona intombazane eyovusa isizungu ngenxa yobukhona bayo, futhi ishade insizwa enjalo-lokhu kuzosaphazamisa impilo yakho kuze kube phakade.
Kodwa uma owesifazane ethatha isinqumo sokuncintisana naye, kodwa indoda ethandekayo, zonke izindlela ezenzekayo zizoqala - umzamo wokuthola izithakazelo ezivamile, umbuzo wemali noma umsebenzi, amasu ajwayelekile "wesifazane obuthakathaka". Ezimweni eziningi, umuntu uqala ukubona kumfazi noma umngane omuhle, noma obuthakathaka kunaye, abe ngumuntu, futhi uqala ukushintsha kancane kancane umbono wezwe nokuziphatha kwakhe. Kodwa uma kwenzeka ukuthi wonke amaqhinga omama asebenze, futhi othandekayo akafuni ukwenza ukuvunyelwa, kungcono ukubuyela emthunzini bese uhamba. Izenzo ezinjalo zizophoqa indoda ukuba icabange ukuthi ngabe uyayidinga yini lona wesifazane, mayelana nokuphila kwakhe, ukuziphatha kanye nezinye izinto ezihlakaniphile. Ukuqaphela ukushonelwa komuntu othandekayo kuyophoqa noma ubani ukuba ahlanganyele ekuzihloliseni nasekuhlaziyweni kokuziphatha kwawo nemigomo yokuphila. Phela, siyazi ukubaluleka kobudlelwane kuphela lapho bona bebhujiswa ngamazwi nokuziphatha kwabo, futhi isifiso sokubuyela othandekayo sinikeza amandla futhi singaba yisikhuthazo sokushintsha wena.
Okufanele ukwenze uma othandekayo encike kakhulu emidlalweni yekhompyutha
Yini amadoda ayibheka njengothando?
Impumelelo yezempilo ye-sodium chloride zokugeza
Amapulangwe okusawoti - okuhle esikhumbeni
Indlela yokuziphatha kahle nendoda
UKsenia Sobchak utshele ngenkinga enkulu yabesifazane abakhulelwe
Umsizi omncane obomvu ekulwa nesisindo esikhulu kakhulu
Ukuhlambalaza komuntu othandekayo kwi-intanethi
Indlela yokukhulula izidingo zamanga
Isaladi kusuka ku-beet nama-apula
"Doga Yoga" - yoga nenja yakhe
Izinhlobo zokuhlinzekwa kweplastiki ukuze kuhlinzekwe ubuciko ekuguleni kwegazi
Amaswidi ama-Eastern Pumpkin